Gypsum fiber machira eepasi kukwirisa - zvese kubva A kusvika Z
Kuvandudza kushanda kwechero bhizinesi kunoenderana zvakananga nekushandiswa kwezvinhu zvemazuva ano uye neazvino matekinoroji. Yakanakisa nzira yekubatanidza iyo inokutendera iwe kushingairira kufamba munzira yekuvandudza uye yemazuva ano.
Makambani ekuvaka muzviitiko zvavo zvezuva nezuva ari kuwedzera kutsiva drywall (GKL) nyowani nyowani padyo nayo mune hunhu, gypsum fiber machira, GVL, nekuuya kweiyo tekinoroji nyowani yekugadzirwa kwepasi pakaipa, inonzi "yakaoma screed", yave kufararira mukuvaka.
Iyo inokodzera chero kupedzisa kupfeka, inoshandiswa zvakanyanya pakuita basa rekudzoreredza pahuriri, rinovatendera kuti vakurumidze uye nemazvo kuyera, kana kuisazve. Panguva imwecheteyo, nyaya dzekuvhara izwi uye kuputira pasi, kunyaradza uye kuchengetedza moto zviri kugadziriswa.
Technical ma parameter eGVL
Masheets akati akakwenenzverwa ekushongedza zvinhu umo gypsum fiber yakasimbiswa neakachekwa cellulose inoshanda senge bhainda.
Unyanzvi zviratidzo zveGVL pasi
Iko pamusoro peiyo gypsum fiber bhodhi padanho rekugadzira kunoitwa kukuya nekugadziriswa ne latex. Izvi zvinoita kuti zvinhu zvibvumire kusvibisa uye chero nzira dzekurapa dzinoitwa pasina kumbotanga kushandiswa kweye primer layer
Kuita hydrophobic impregnation yezvinhu ne latex, kana kushomeka kwayo, inovimbisa kugadzirwa kweGVL machira emhando dzinotevera:
Yakajairika GVL. Yakagadzirirwa kushandiswa mumakamuri ane yakaoma uye yakajairwa microclimate. Zvinodikanwa zvemhando yemashizha aya akaiswa neSNiP II-3-79;
GVL inopesana nehunyoro. Yakagadzirirwa basa mumaindasitiri uye ehurumende nzvimbo, uko kwakanyanya mwando kunozivikanwa.
Mapepa anogadzirwa muhukuru hwakaenzana: kadiki-kadiki (10 * 1000 * 1500) uye mureza (10 * 1200 * 2500). Iwo machira anosiyana pakukora kubva pa8 kusvika 19 mm. Iyo micheto yeiyo jira yakapetwa.
Mutengi anopiwa vhezheni yezvakatsanangurwa zvigadzirwa, zvakaunganidzwa kubva kune gypsum fiber bhodhi, iine huviri hwakapetwa (yakanamirwa mufekitori uye inopihwa nekapeta inogona kuzvivharira).
Kutakura kwakanaka kweGVL machira
Zvekureruka kwekufamba, GVL yakagadzirira-yakarongedzwa mune hunyoro-chiratidzo mabhegi. Imwe neimwe ine kubva pamakumi mana kusvika makumi mashanu mapakeji. Anogadzira epasirese zvigadzirwa zvekuvaka saKnauff anotakura 40 mapepa.
Kuchengetedza micheto kubva kuchipwanya uye kunyorova kupinda mukati mechikamu chekufambisa, gaskets uye chaiwo mapallet anoshandiswa. Iyo ficha inogona kumira yakaderera tembiricha, ndeye moto wakachengeteka, zvakatipoteredza zvine hushamwari uye nyore kugadzirisa.
Kushandiswa kwaro kunokubvumira kugadzirisa humidity mumhepo yekamuri. GVL inogona kuzvipa kana kuzviunganidzira mukati mavo.
Kuyera pasi uchishandisa GVL machira
Hupenyu hwesherufu hwakaganhurirwa kune rimwe gore. Kunze kwekuti nguva yese iyi maGVL anochengetwa chete mumakamuri akaoma.
Izvo zvinhu zvataurwa zvinoshandiswa zvakanyanya mukuvaka uye kuvaka mabasa, pamwe nekuwedzera kuchengetedzeka kwenzvimbo yezvipfuyo uye zvehunyanzvi zvinangwa. Pamusoro pekuronga pasi, GVL inoshandiswa kana ichiita basa rakatarisana pamatenga uye nekugadzirisa zvikamu zvemadziro.
Kazhinji kacho dzinoshandiswa mukugadzira pombi dzemvura uye dzimba dzekugara, mumakamuri epamusoro nemakamuri ekuchengetera, dzimba dzepasi uye matenga. Chinhu chikuru chinodiwa ndechekuti iwo mwando chiratidzo mukati mavo haupfuure makumi manomwe kubva muzana.
Moto unodzora zvivakwa unogadzira aya machira sarudzo yakanakisa yemashini erevheta. Kudzivirira kwavo kwehunyoro kunovaita kuti vakodzere kushandiswa mumagaraji uye mudzimba dzekugezera. Masimba esimba anoita GVL sarudzo yakanakisa yekuronga matare uye magyms.
Iwo hwaro hwakagadzikwa gypsum fiber bhodhi inogona kunge iri nzvimbo yakati sandara (pasi pehuni, yakagadzirwa nekongiri yakasimbiswa, nezvimwewo). Zvishandiso zvinogona kushandiswa kune subfloors, kuputira, kana hwaro hwekupedzisa pasi.
GVL pasi inogona kushandiswa pakurongedzerwa kunotevera kwemarara, mataira, nezvimwe.
Kugadzikana kwekushandisa kwakanyanya kugoneswa nehunyanzvi parameter inowanikwa muGVL:
Izvo zvinhu zviri nyore kugadzirisa;
Akawedzera simba uye kuomarara;
Inoratidzira yakakwira moto chengetedzo;
Inoshanda seyakareba mhando yekupisa yekuisa zvinhu;
Kuramba kune tembiricha yakaderera;
Kuwedzera kwekuita kwekudzivirira inzwi;
Kuvimbisa hunyoro hwakaringana panzvimbo yacho;
Anoshanda asina maturo kushandiswa.
Kurongeka kwepasi uchishandisa "pakaoma" tekinoroji
Kazhinji kazhinji, shanda pane iko kugadzirirwa kwemafloor ekupedzisa kupfeka kunosanganisira kurongedzwa kwescreed, iyo inobvumidza iwe kuyera hwaro, kuiisa mukati, kuwedzera izwi rekudzivirira zvivakwa uye kupa kuomarara kunodiwa.
Iyo screed, inoitwa ichishandisa simende matope, ihwo hunyanzvi hunyanzvi hunyanzvi, hunosanganisira huwandu hwakakura hwebasa remaoko Iwo akareba kwazvo munguva, sezvo ivo vachida kuzorora kwenguva refu pabasa kuti vawane yakakwana kuomeswa kwemakemikari yemhinduro yakadururwa.
Kana iyo screed ichidikanwa kuti iitwe mumatanho maviri, iyo nguva yakataurwa inowedzera zvakare. Mushure mekuomesa zvakakwana, inoona ¼ yeiyo yakazara huwandu hwekutakura. Sarudzo inoda mari yekuwedzera yekutenga kwekudzivirira mvura zvinhu zvepasi, kuverengera viscosity inodiwa, nezvimwe.
Yakagadzirira-yakaomeswa yakaoma musanganiswa yekurongedza screeds uchishandisa gypsum fiber bhodhi iri mukuda kukuru pakati pevashandi veunyanzvi. Inonzi "yakaoma".
Mascreeds akadaro haagadzirisike mhinduro dzehunyanzvi kurongwa kwe:
Rough uriri (pamwe nekushandisa kuputira) kwavo kuputira uye kutseresa (ukobvu hwenzvimbo dzinowedzera kusvika pamamirimita makumi matatu);
Basic uriri, vakapakata backfill vachishandisa rakawedzerwa ivhu, pamwe zvakakwana kuputira (pakukora uriri kunowedzera kusvika 20 mm);
Prefabricated screeds, iyo yekumisikidza iyo, kuwedzera kune yakawedzera ivhu, inoitwawo nekuwedzera polystyrene mahwendefa. Sarudzo iri kudiwa. Kana iyo yepasi pasi paine kusaenzana kwakakura, kana kana panodiwa zvakanyanya kukwirira kwavo.
Iyo yakaoma screed tekinoroji inobvumidza vanopedzisa, mushure mekurongeka kwayo, kuenderera kune pasi pevhu repamberi pekuvhara.
Unyanzvi parameter emashizha ataurwa anopa mukana wekushandiswa kwemastics uye glue, ayo, nemakemikari avo zvinhu, zvinoenderana nezvinhu izvo zvinobva kune gypsum fiber board.
Matanho ekuisa pasi pasi uchishandisa gypsum plasterboard
Kuiswa kweGVL pasi
Padanho rekutanga, basa rinoitwa kugadzirira iripo nzvimbo. Muzviitiko izvi kana pasi pemapuranga paine zvigadziri, zvigaro zvepamberi zvinosimbiswa kubvisa kudzoka kwavo, chinova ndicho chikonzero chechikara chakataurwa. Kana kupfeka kuri kongiri, saka zvakaringana kubvisa marara nekutsvaira.
Kugadzirira iyo screed, pamusoro peyakaomeswa zvinhu, mushure mekuimesa, iwo machira akaiswa. Iri basa rinosanganisira matanho akati wandei: yakasarudzika tepi yakagadzirwa nebasalt donje mvere, isolon, kana furo inoiswa parutivi rwese rusvingo - pasi pejoinhi (perimeter), iro donzvo guru rekuti kunyorovesa tembiricha shanduko mune ejometri kukura kweiyo screed isina kuiparadza;
Iyo yepamusoro yakagadzirirwa screed yakafukidzwa nemashiti akati wandei ePe firimu (inopindirana), kuvapo kwayo kunopa mhute chipingamupinyi uye kunoita basa rekudzivirira kwemvura; vatungamiriri vanoburitswa, sezvo inogona kushandiswa danda rehuni, kana chimiro chakagadzirwa neAl, pakati pacho izvo zvinhu zvinogadzira yakaoma screed inodururwa.
Pamusoro pechinangwa chakaratidzwa, zvinhu izvi zvinoita mamwe mabasa maviri: anoshandiswa semabhakoni ekusimudza pamusoro, iwo hwaro hwekumisikidza machira kuti aiswe.
Kuti kuderedze kushandiswa kweakaomeswa screed, kana uchinge waita yakakosha kuyerwa kwechigadziko, hwaro hunosanganisira yakawedzera ivhu jecha, slag pumice inotangirwa-kudururwa. Uye chete ipapo izvo zvinhu zvinozadzwa mukati, senge Belarusian Compavit.
Kana zvichidikanwa kuti zviitwe zvakatemwa screed nekumisidzana panguva imwe chete kwepasi, ipapo dura rekuputira, rakasviba kana rine furo, rinotangirwa kuiswa pasi paro.
Panguva imwecheteyo, kugoverwa kwekutaurirana kuri kuitwa, izvo, sekureva kweprojekiti, kunofanirwa kuiswa pasi pevhu. Panguva imwecheteyo, uriri hunodziya huri kuiswa.
Mutsara wekutanga wemashizha uri kuiswa. Nekurongeka kwayo, diki-fomati vhezheni yeGVL inosarudzwa. Kuisa kunoitwa pamwe chete mumba. Kana kuputira kuri kwakawanda, saka basa rinotanga kubva pakona iri padyo nemusuwo wepamberi. Muzviitiko panoradzikwa mamwe marangi ekudhirowa, machira anosonerwa kubva kumadziro akatarisana nemusuwo.
Iwo machira akagadziriswa neako ekuzvibata-ekurova ekumusoro, iwo urefu hwayo hunosarudzwa uchifunga nezve chinongedzo: GVL ukobvu + 10 mm. Iri jira rinopedzisa raini rinotevera rinotemwa nebanga remusangano, jigsaw kana hacksaw. Kana iyo flooring yemitsara yakati wandei yegypsum fiber bhodhi yakapihwa, ipapo yega yega inotevera inotevera inoiswa nenzira imwecheteyo seyezvidhina. Ndokunge, nekukanganisa kwe300 - 400 mm.
Munzvimbo idzodzo umo polyurethane furo inobudikira pamusoro pechiso chakatsanangurwa neGVL, inodimburwa. Izvo zviyero zvinobvumidza kuvepo kwezvikamu munzvimbo dzeglued yemashiti, iyo upamhi hwayo haufanire kupfuura mamirimita maviri. Iyo glue yakasvinwa kunze panguva yekumanikidzwa kwenzvimbo dzakasungwa dzinofanirawo kubviswa.
Kana iko kushandiswa kwechipiri chegypsum fiber bhodhi kuchipihwa, saka chinoiswa pamusoro pechikamu chekutanga (chine kona yemadhigirii makumi mapfumbamwe), yaimbobata nzvimbo yayo nePVA, kana neimwe mhando yekunamatira mastic. Sarudzo yekumisikidza machira-maviri-kupfeka aine maviri machira ekugadzirwa kwefekitori anopihwa. Mune zviitiko apo iyo gypsum fiber bhodhi ine yakapetana padivi pemicheto, iyo nzvimbo yakaungana zvakafanana kune tekinoroji ye laminate pasi.
Mumamiriro ezvinhu apo panotarisirwa nhurikidzwa yechitatu, yatove kuitwa nemashizha akajairwa pamwe nekuwedzeredzwa kweiyo fosi yezvinhu zvekupupa. Ukobvu hwekupedzisira hunofanirwa kunge hwakaenzana neukobvu hwakabatanidzwa hwematanda maviri akange akaiswa kare.
Basa rekupedzisira. Yega-yekuzvirovera misoro yakadzungidzirwa kumhanya uye iripo seams inoda kuve putty. Mushure meizvozvo, iyo nzvimbo yakafukidzwa neyekutanga, nekuda kwekuti iro rakapetana rakatsetseka pamusoro peiyo yakagadzirirwa base inogadziriswa. Chero chifukidzo chepasi chakaiswa pamusoro pacho.
Zvakanakira yakaoma yakaoma screed pasi
Kutanga uye pamberi pezvese, kwavo kuita kwakawanda. Kurongeka kweiyo yataurwa pamusoro screed pamwe nekushandisa gypsum plasterboard inopa iye anopedzisa mukana wekushandisa, seyekupedzisira, pasi pechifukidzo chemhando ipi neipi (tile, laminate, nezvimwewo). Kureruka kweiyo hwese hwaro hwesimba uye simba rayo zvinoramba zvisina kuchinja.
Kuiswa kweGVL pasi:
Inoitwa padanho rekutanga rebasa rinoitwa munzvimbo;
Inoitwa munguva pfupi, nekuti huremu hwemashiti haupfuure 18 kg;
Tekinoroji irwo ruzhinji rwemhando yebasa;
Inokutendera iwe kuti uwane iwo akakwana mwero wepamusoro uye majoini eiyo gypsum fiber bhodhi yekuzotevera kuisirwa kwechero yakasarudzwa pasi yekuvhara;
Zvakatipoteredza zvakachengeteka zvachose. Panyaya ye acidity, izvi zvinhu zvinofananidzwa neizvo zveganda revanhu;
Inoratidzira yakakwira kupfeka kuramba;
Kuisirwa kunotenderwa gore rese;
Inomira yakasimba yakasungwa mitoro;
Padanho repasi rakaradzikwa, zvinonyatsorwisa kupararira kwemoto wakashama;
Iko hakuna zvirambidzo pakushandisa.
Akasarudzwa nenzira kwayo maGVLs chivimbiso chekuti basa richaitwa nehunhu hunodiwa. Kuti uipedze, unofanirwa kutevedzera zvinotevera kurudziro:
Yakasarudzwa nenzira kwayo maGVLs chivimbiso chekuti basa richaitwa nehunhu hunodiwa. Kuti uipedze, unofanirwa kutevedzera zvinotevera kurudziro.
Mutemo wekutanga wekusarudza GVL pasi
Tarisa chiyero chemugadziri weGVL.
Nhamba yepamusoro mumusika wepamusha ndeyeiye wechiGerman mugadziri Knauf, uyo, kubvira 1993, anga achichengetedza mari muzvivakwa zvake zvekugadzira zvakaiswa muRussia nenyika dzeCIS. Yakagadzwa muBavaria (Germany), kambani yakagara ichiva imwe yevanonyanya kuzivikanwa vanogadzira zvigadzirwa zvekuvaka, kusanganisira GVL. Kuiswa kwezvigadzirwa zvemugadziri akatsanangurwa (uye pamashizha kumashure) kune chitambi chebhuruu chakagadzirwa nependi isingadzimiki, ine ruzivo runotevera: mhando yegypsum fiber bhodhi, mativi ayo, zviyero zvejometri uye muyero mukati. zvinoenderana nenyaya yacho.
Mugadziri akadaro weGVL sa "GYPROC" ane mukurumbira webhizinesi. Iyi kambani yeScandinavia inopa musika nezvigadzirwa zvine simba rakawedzerwa rinowanikwa kuburikidza nemamineral ekuwedzera ayo anoita mabasa ekusimbisa.
Hukuru hunhu uye hukuru hwemashamba eGVL
Plasterboard partition nemusuwo
Kuiswa uye kuiswa kwematope eparsterboard
Mhando dzepasi screeds, tekinoroji
Mibvunzo ye64 mu database yakagadzirwa mu 0,832 masekondi.